QALABKA PHALAENOPSIS: NOOCYO ISUGEYN AH OO LEH SAWIRRO, TALOOYIN KU SAABSAN DARYEELKA, TALLAALIDDA IYO DHALMO, CAYAYAAN IYO XAKAMAYNTA CUDURKA - SOOSAARKA DALAGGA
Sameeynta nacaybheeska dabeecadda dabiiciga ah iyo nimcada: oo dhan oo ku saabsan content of orchids a white cad Phalaenopsis guriga
White phalaenopsis - calaamad muujinaysa daahir, ubax qurux badan iyo aristocratic. Maalmihii hore, waxaa si joogta ah loo soo wargeliyey in dhirta ay leedahay sifooyin suugaan ah: xargaha ayaa laga sameeyay tufaaxa si looga ilaaliyo indhaha sharka, iyo xididada loo isticmaali jiray inay sameeyaan jacaylka jacaylka. White orchid phalaenopsis ayaa caan ku ah beeralayda sababtoo ah xaqiiqda ah in dhirta si xor ah u la qabsadaan xaaladaha guryaha iyo qurxinta gudaha.
Waa maxay nooca ubaxa?
Qalabka phalaenopsis waxaa laga tarjumay Giriig ahaan sida Phalania ("aboor") iyo Opsis ("likeness"). A orchid cajiinka ah, ama "epiphyde", waxay isticmaashaa warshad deris la ah oo taageero ah, laakiin si toos ah ayey u adeegtaa. Dabeecadda ayaa doorta xayawaanka qoyan iyo kaymaha kulaylaha. Markii ugu horreysay ee geedka waxaa laga helay qaybta waqooyiga ee jasiiradda New Guinea.
Muuqaal iyo sawir
In the duurjoogta, phalaenopsis cad kori doono ay duurka leh caleemaha fareeshka, u jeestay rhizomes awood leh, oo lagu kobciyo chlorophyll.
Xididdada dhirta, qooyay qoyaan, noqdaan dhalaal dhalaalaya. Phalaenopsis ayaa sannad walba wareega marka uu ugxan-furo midba kan kale. Mid ka mid ah burooyinkeeda waxay ku noolaan karaan ilaa saddex bilood. Nolosha orchid waa in ka badan toban sano.
Dhaqanka xajmiga leh wuxuu ka kooban yahay asliga ah oo leh cirbado, caleemo xajin, daboolay wax miro iyo basaboor. Tirada burooyinkeeda way kala duwan tahay waxayna ku xiran tahay gobolka geedka, iyo sidoo kale cabbirka. Qolalka phalaenopsis wuxuu koraa illaa mitir oo dherer ah, sameynta ubax oo leh dhexdhexaad ah ilaa laba iyo toban centimitir, waxaa kaloo jira shakhsiyado yar yar oo gaaraya 40 cm.
Waa maxay darajooyinka fasalka phalaenopsis waa cadaan:
Maalmahan, beerashada orchid waa ganacsi faa'iido leh. Iyo 500 sano ka hor Yurub kuma aysan ogaanin sida loo caan baxay orchid cad. Marka hore waxay keeneen nuqulo aan ku faraxsaneyn sida beerta yurubiyaanka ah ee aqoonta iyo waayo aragnimada.
Taariikhda Qaaxada Phalaenopsis waxaa lagu dhajiyay xididada qarnigii 19aad. John Ceden, oo ah kaniisadda Ingiriisiga ah iyo jardiinooyinka ayaa ka tallaabay Phalaenopsis of Aphrodite iyo Fareenopsis fuul, iyo koollada ugu horeysay ayaa la helay.
Waxaa ugu wanaagsan in dhirta lagu beero dheri cad oo leh godado abuuraya hawo. Iyada oo ay sabab u tahay nalalka gudbinta iftiinka ee caagga ah, way sahlan tahay in la dabagalo xaaladda xuduudaha iyo go'aamiso waqtiga waraabka.
Iska ilaali dusha sare. Waraabinta dhirta waa lagama maarmaanka kaliya marka substrate yahay qalalan. Markaad transplanting, isticmaal substrate gaar ah.
Si aad u hesho warshad xaddiga suurtogalka ah ee qoyaanka, dheji dhererka phalaenopsis ee labaatan daqiiqo biyo, heerkulka kor ku xusan qolka dhowr. Qeybta hoose ayaa biyo ku diiriyey qubeyska. Waraabinta warshadda ilaa saddex jeer toddobaadkii. Xilliga qaboobaha, waraabinta waxaa la dhimaa hal mar toddobaadkii.. Si aad u abuurto heerka ugu sarreeya ee raaxada loogu talagalay dhirta - meel u dhig humidifier soo socda.
White phalaenopsis waxay u baahan tahay iftiinka qorraxda oo aan jeclayn iftiinka qorraxda tooska ah, hoos yimaada ficiladooda geedka ayaa gubi doona oo dhimanaya. Xaaladda marka nalalka dabiicigu uusan ku filneyn, samee iftiin macmal ah. Nalalka dheecaanku waxay si fiican u shaqeeyaan kiiskan.
Phalaenopsis waa warshad kuleyl ah, heerkulka heerkulka ugu fiican wuxuu u dhexeeyaa + 20 ilaa + 24 digrii. Heerkulka hoos ku xusan + 20 digrii dhirta ayaa joojisa isbeddelka.
Waxaanu soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan daryeelka ee phalaenopsis cad:
Wixii warshadda si ay u koraan oo u horumariyaan waraabinta iyo raacitaanka heerkulka saxda ah kuma filna. Wixii quudinta dhirta waxaa wanaagsan in la isticmaalo bacriga dareere ah oo khaas ah "loogu talagalay orchids." Deegaanka Acidic wuxuu waxyeeleeyaa phalaenopsisSidaa darteed, asiidhka bacriminta ma aha mid ka yar 5 ph-7ph.
Inta lagu jiro xilliyada koritaanka firfircoon, gabbasho waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta kala duwan. Marka la eego heerka koritaanka Orihdei, waxaa wanaagsan in la doorto Bacriminta nitrogenous, taas oo dardar-gelinaysa koritaanka massage ah. Iyo at marxaladda ubax - Bacriminta potash-fosfate, kicinta nuugista cellular iyo photosynthesis, iyo sidoo kale formation of ku hari caafimaad leh.
Shirkadaha khibraduhu way kala duwan yihiin hababka soo socda ee bacarimida:
Dharka labiskaHabka waxaa lagula talinayaa kaliya dhirta caafimaad leh. Muujisaa uureysiga substrate ee nafaqooyinka.
Xaddidaadda. Phalaenopsis laguma talinayo in la bacrimiyo inta lagu jiro isu tallaalidda. Ha bacrimin nidaamka xididka geedka daciif ah.
Ma dhali kartid dhirta inta lagu jiro gaajo, sababtoo ah waxay gaabisaa nolosha geedka, taas oo keeneysa in la yareeyo waqtiga ubax.
Dharka ugu sarreysa. Inta lagu jiro sameynta xididada ama dhaawaca nidaamka asaasiga ah, waxaa fiican in la isticmaalo codsiga caleenta. Bacriminta ayaa si degdeg ah ugu dhex gala caleemaha xagjirka ah, iyo natiijada muuqata kuma hayso inaad sugto.
Haddii qadar weyn oo dhoobo ah ay ku urursan yihiin derbiyada dheriga, iyo xididdadu waxay si buuxda u buuxiyeen weelku, caleemuhu waa ka daalaan xitaa ka dib marka la waraabiyo, ka dibna waa waqtigii loo bedelay.
Waqtiga ugu wanaagsan ee la wareejiyo - dhammaadka xilli kuleylka. Dib u dhig dhirta dhirta labadii sanaba mar. Dheriga saxda ah ee loo yaqaan 'transplantation' wuxuu leeyahay nidaam dheecaan leh, darbiyada hufan. Lakabka biraha ah 5 cm qaro ayaa la dhigayaa xagga hoose.
Si loo bedelo, ciid ah oo leh maaddooyin dhaadheer oo dhuxul ah iyo jilif geed ayaa si fiican u habboon.
Waxaanu soo bandhignaa daawashada fiidiyowga ku saabsan ku-tallaalidda orchid:
Waxaa ugu wanaagsan in la soo saaro phalaenopsis guga dabayaaqada iyo xagaaga hore. Warshad qaangaar ah ayaa la faafiyaa iyadoo loo qaybinayo baadiyaha. Xaalad muhiim ah waa joogitaanka 6-7 caleemo caafimaad leh. Iyadoo caawinta beerta beerta gooyaa qaybta sare ee geedka. Qaybaha waxaa lagu baari karaa kaarboonka firfircoon, qaybta gooyaa ee geedka waxaa lagu beeray substrate.
Waxaan soo bandhignaa daawashada fiidiyowga ku saabsan dhalashada orchid:
Nasiib darro, qof kastaa si fiican uma daryeeli karo orchids, taas oo keenta infekshanka fayrasyada, fungi, caleemaha, caarada iyo qoryaha. Caleemaha caleenta, caleemo qorrax leh, daboolay dhibco - tani waa natiijada shaqada cayayaanka. Ugu Caansan:
Thrips - Cayayaanka u eg sida barafka cirifka ah, ka dib markaad dheregto, si tartiib tartiib ah dhulka ugu qulqulaya.
Haddii ay jirto lacag ku yaal caleemaha iyo dhibcooyinka, waxay u badan tahay, waa thrips. Caleemaha waa la sifeeyaa, qaybaha waxyeellada ah waa la saaraa, dhirta waxaa lagu daaweeyaa aktar.
Mokritsy - ha ku dhicin khatar, mana aha dulinyo of orchids, laakiin waxay gnaw xididdada yar yar iyo caleemaha. Si aad u soo qaadato si fudud, waa ku filan inaad waraabiso dhirta si ballaaran leh. Cayayaanka ayaa soo baxa oo si sahal ah ayey isugu xiran yihiin.
Mealybug - Cayayaanka, cuno casiirka caleenta. Goobaha saldhigga ubaxa iyo hoostooda. Foomamka gumeysiga qaabka loo yaqaan "cobwebs", oo daboolaya qayb ka mid ah saxanka caleen. Ka dhig caleemaha la jabsaday iyo waxyeelo, daaweeyo dhirta leh fitoverm, haddii aysan jirin ukun qaylo leh afar todobaad, tixgelinayaan dhirta caafimaad leh.
Dhab - Fungus caag ah oo infakshiyo caleemaha geedka. Dhibco cagaaran ayaa ka muuqda dusha sare ee xaashida. Daaweynta: iska tuur caleemaha saameeyeen, daawee geedka 25% aalkolada.
Rot - dhirta horey u soo gaadhay cayayaanka ayaa u nugul cudurkan. Dhibaatooyinka dufanku waxay ka muuqdaan dusha sare ee caleen - qaababka halganku waxay la mid yihiin sida cutubkii hore.
Aphid - Naas-nuujinta lafteedu maaha mid khatar ah, laakiin dheecaanku wuxuu carqaladeynayaa habka xakamaynta jirka ee phalaenopsis, taas oo ka qayb qaadata taranka fungi iyo bakteeriyada.
Nematodes - Nidaamka caadiga ah wuxuu daciifiyaa dhirta, gogol dhigaya xididada iyo afkoda, quudinta dheecaanka. Orchids ayaa istaagay koritaanka, ka dibna kala jaji oo dhinta.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan cudurada orchid iyo cayayaanka:
Si looga fogaado infakshanka shilalka ee qaybta aad jeceshahay, raac tilmaamahan:
Ku rid ilbiriqaha u dhaxeeya 30-40 cm.
Biyo warshad subtropical subaxdii.
Haddii ay jiraan dhirro badan oo qolka ka mid ah - saqaf ama taageere wayn, waxay ka yareyneysaa dhibaatooyinka iyo jirooyinka.